Ihowuliseyili amaqhekeza Custom umdlalo meple lehoseyile enemibala zeplastiki meeple yomdlalo webhodi yoMvelisi kunye nabenzi | Kylin
Iziqwenga umdlalo Custom meeple lehoseyile meeple zeplastiki ezimibalabala umdlalo webhodi
I-Meeple yesiqhelo yePlastiki ihlala isetyenziselwa imidlalo yebhodi, sinokwamkela iintlobo ezahlukeneyo, ubukhulu kunye nemibala ngokwezifiso.
Meeples zeplastiki $ 0.01- $ 0.10 / pc
Ubukhulu be-12 / 16mm
Izinto zeplastiki / i-Acrylic
MOQ 1000 iiseti
intlawulo yesampula Simahla kwiisampulu zethu ezikhoyo
ixesha lesampulu iintsuku ezi-7-10
Ixesha Production 10-35 iintsuku
Isiqinisekiso seCITI, EN71, CE, SGS
Ixesha lokuhlawula i-30% yedipozithi kwangaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa
Ukuba unemibuzo malunga nokwenza umdlalo, okanye izinto zomdlalo, izixhobo, ubungakanani, imibala kunye nokupakisha, njl, nceda ukhululeke Nxibelelana neentengiso zethu ezinamava kunye neqela lobugcisa. Siya kuba ngabokuqala ukukuphendula. Ukuba unomdla kwezinye iimveliso, wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi, siyavuya ukukukhonza.
Singumenzi wobuchwephesha kunye nelithumela ngaphandle elisebenza ngokukodwa kuyilo, imveliso kunye nophuhliso lwemidlalo yebhodi, iiphazili zejigsaw, imidlalo yamakhadi. Sikwisixeko saseHangzhou ngokufikelela ngokulula kwikhonkco lothutho. Sinomshicileli we-Heidelberger oqeqeshiweyo, i-varnishing ngokuzenzekelayo, izixhobo zokusika kunye nezixhobo zokupakisha. Bonke abathengi behlabathi banokholo kumzi-mveliso wethu ngenxa yegama lethu eliphakamileyo lezorhwebo, isiqinisekiso somgangatho owomeleleyo kunye nenkonzo yobungcali. Besisenza into enye kuphela iminyaka eli-10, kwaye sizakuqhubeka siyenza kwixesha elizayo. Injongo yethu kukuba ngumenzi webhodi yebhodi engcono kakhulu eChina!
"U-Ling kunye neqela laseKylin babeluncedo kakhulu kwaye baphendula ngelixa siphuhlisa uyilo lwethu. Siyavuya yimveliso yokugqibela. Ndiyathemba ukuba siza kufumana inguqu ukuze sisebenzisane neli shishini kwakhona."
-Kaitlin Osman, eUnited States
"Imveliso bekunjengoko bendiyalele. Ipeyinti kunye nokugqitywa bekumgangatho olungileyo, kwaye amaqhekeza ebekhona kwaye enziwe ingxelo. Ngaba uza ku-odola kwakhona!"
-Billy Leung, waseKhanada
"Izinto (iipaji zomdlalo) zagqitywa ngokuchanekileyo kwinkcazo; umbala, imilo, ubungakanani, kunye nezinto. Izinto zazisele zidityanisiwe ukuze ndizisebenzise (ngombala) eyayiyibhonasi engalindelwanga eyonga ixesha kunye neendleko zomsebenzi. Ixabiso ungcono kunokhuphiswano. Ndonwabe kakhulu ziziphumo. "
-Thomas Forsyth, eUnited States
"Ndifumene iisampulu zazo zonke izinto endinomdla kuzo ngexesha. Inkonzo yabathengi imnandi."
"Inkonzo endiyifumene kuAlex yayiqaqambile. Wayeluncedo kakhulu kwaye enobuchule."
-UJenny McOrist, e-Australia
Egqithileyo Iziqwenga zemidlalo yebhodi yesiko enemibala yeplastiki yehexagon zeplastiki
Okulandelayo: 8mm / 10mm Ihowuliseyili siko umbala umbala iityhubhu zeplastiki ityhubhu
ibhodi siko iziqwenga umdlalo ngamaplanga bit iinkuni Meeple ...
Iziqwenga umdlalo Custom Ihowuliseyili iidayisi yerhasi ...
Umthengisi weBhodi yomthengisi weepensile zesiko e ...
Iibhodi zebhodi yezemidlalo zihonjiswe ngomthi ...
Umdlalo webhodi yebhodi yebhokisi yebhola yebhola yebhokisi yebhokisi
Iziqwenga umdlalo Custom lehoseyile zeplastiki rock ...
Amakhadi okuQinisekiswa kuMgcini weenkuni, Ikhadi lemikhono, Ukudlala okushicilelweyo okuqhelekileyo, Idayisi yesiNtu, Amakhadi okudlala aqhelekileyo, Amalaphu Umdlalo weBhodi,